HORDHAC: Wax kasta oo aad uga baahan tahay kulanka adag Liverpool vs Chelsea ee koobka UEFA Super Cup 2019 – Gool FM
(Yurub) 14 Agoosto 2019. Indhaha Mucaashiqiinta kubadda cagta ee adduunka ayaa caawa oo Arbaco ah ku sii jeeda garoonka Vodafone Park magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, halkaasoo ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Liverpool iyo Chelsea kulanka UEFA Super Cup.
Liverpool ayaa raadineysa koobkeedii afaraad ee UEFA Super Cup-ka iyadoo dooneysa inay soo barbareeyso kooxda Real Madrid, halka Chelsea uu hogaaminayo macalinkooda cusub ee Frank Lampard ay isku dayi doonaan inay ku guuleystaan koobkan markii labaad.
Taariikhda: Abaco, 14 Agoosto 2019
Saacadda: 10:00 Habeenimo xilliga geeska Afrika.
Garoonka: Vodafone Park.
Garsooraha: Stephanie Frappart
Naby Keita ayaa ka baxay tababarkii ugu dambeeyay ay ku sameysay kooxda Liverpool magaalada Istanbul, kaddib markii uu soo gaaray dhaawac dhanka muruqa ah, taasoo shaki galineysa ka qeyb galkiisa ciyaarta caawa.
Alisson Becker oo jimcihii lasoo dhaafay kasoo gaaray dhaawac kulankii ay kaga daah furteen horyaalka Premier League ayaa seegi doona ciyaarta caawa ee Chelsea, kaasoo horey loo sheegay in ugu yaraan uu garoomada ka maqnaan doono isbuucyada soo socda.
Sadio Mane ayaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo ciyaartan kaddib markii uu ka qeyb qaatay tababarka buuxa ee jimcihii, laakiin waxaa la arki doonaa go’aanka kama dambeysta ah uu qaadan doono tababare Klopp
Chelsea waxaa ka maqan xiddigaha Antonio Rudiger, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi iyo Willian, halka ninka muhiimka ah N’Golo Kanté uu shaki ku jiro.
* Kulankan ayaa noqonaya kii afaraad kooxda Chelsea ee koobka UEFA Super Cup, waxayna ku guuleysteen markoodii ugu horeysay ay ka soo muuqdeen waana sanadkii 1998, balse waxay ku guuldareysteen labadii jeer kale ay kula ciyaareen kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Munich.
* Kulankan ayaa noqonaya kii 11-aad ay labada kooxood ku wada ciyaaraan tartamada Yurub tan iyo 2005-tii, 10 ka mid ah waxay ahaayeen tartanka Champions League, 2 jeer waxaa badisay Liverpool, 3 jeer kalena waxaa adkaatay Chelsea, halka 5-ta jeer kalena ay barbaro galeen.
* Kooxaha dalka England kuma aysan guuleysan koobka UEFA Super Cup tan iyo markii Liverpool ay ku guuleysatay 2005, waxaana tan iyo markaas ay la kulmeen afar guuldarro ee isku xigta oo ay ku jirto Chelsea labadii sano 2012 iyo 2013.
* Liverpool ayaa loo caleemo saari doonaa markeedii afaraad koobka UEFA Super Cup hadii ay garaacaan Chelsea, waxayna rikoorkan kasoo barbareyn doonaan kooxda Real Madrid tirada inta jeer ay ku soo guuleysatay tartankan, kaliya Barcelona iyo Milan ayaa ku guuleystay min 5 jeer.
* Chelsea wax guuldaro ah ma aysan kala kulmin tartamada yurub xilli ciyaareedkii hore, waxayna ku guuleysateen koobka Europa League iyagoon wax guuldaro ah la kulmin, guuldaradii ugu dambeysay waxay soo gaartay bishii Maarso 2018 oo ay la ciyaareen Barcelona waxaana loogu awood sheegtay 3-0.
* Liverpool wax guuldaro ah ma aysan kala kulmin koox Ingariis ah 6-dii kulan ee ugu dambeysay tartamada yurub, 4 guul iyo 2 barbaro ah ayey galeen, tan iyo guuldaradii 3-1 aheyd ee ka soo gaartay kooxda Chelsea kulankii wareega 8-da ee Champions League bishii April 2009-kii.
* Liverpool kuma aysan badinin magaalada Istanbul tartamada Yurub tan iyo markii ay ku guuleysteen 2005 finalkii Champions League, wixii ka dambeeyay waxay ku ciyaareen 5 kulan kale, 3 jeer waa laga badiyay halka 2-da jeer kalena ay galeen barbaro.
Liverpool XI: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Mane
Chelsea XI: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso, Mount, Jorginho, Pedro, Barkley, Pulisic, Giroud